The classic Turtle Trading egosi - MT4 Indicators
Home MT4 Indicators The classic Turtle Trading egosi
Iji echiche mere ma ama na kpochapụwo Turtle Trader akwụkwọ, nke a bụ ihe na-egosi na-enye gị ike ịnọ breakout Nkea na bụla timeframe.
This trend following system was designed by Dennis Gartman na Bill Eckhart, na-adabere ná breakouts nke akụkọ ihe mere eme highs na lows na-na nso trades: ọ bụ zuru ezu na-abụghị na “ịzụta ala ma na-ere elu” obibia. Nke a na-emekarị na-esonụ usoro eziri a ìgwè nke nkezi na nkịtị ndị mmadụ n'otu n'otu, na ọ fọrọ nke nta onye ọ bụla ghọọ a uru ahia.
The main rule is “Ahia ihe N-ụbọchị breakout ma na-uru mgbe ihe M-ụbọchị elu ma ọ bụ ala na-n'ahụ (N ga m n'elu M)”. Ihe Nlereanya:
Zụrụ a 10-ụbọchị breakout ma na-emechi ahia mgbe price edinam esịmde a 5-ụbọchị ala.
Gaa mkpụmkpụ a 20-ụbọchị breakout ma na-emechi ahia mgbe price edinam esịmde a 10-ụbọchị elu.
Na nke a na-egosi, ntinye na ụzọ ọpụpụ n'ókè na-egosipụta dị ka akụ na ntụpọ. Original usoro bụ:
Go long on acha anụnụ anụnụ akụ
Exit long positions when a acha anụnụ anụnụ na ntụpọ appears
Exit short positions when a red ntụpọ appears
Nke a na egosi ga-eji ọnụ m ndị ọzọ na-egosi: The Turtle Trading Channel, na-anọchite anya otu oge ma ọ bụ na failsafe trading usoro. The mkpa ọrụ banyere nke a na-egosi bụ na ọ na-achọpụtazi ma ọ bụrụ na gị ikpeazụ ahia e kwụsịrị ma na-enye n'ihu entry n'ókè tinyere na-emekarị. N'ihi ya, ọ bụ nke zuru okè mgbakwunye na trading ọwa n'ihi na a zuru ezu Turtle Trading obibia.
m nwere, Otú ọ dị, gbanwere a obere bit na algọridim na-n'oge ntinye n'ókè ma zere random emekarị swings na ukwuu obodo ọnọdụ. Iji mee otú ahụ, Nke a na egosi ga na-egosi a na-emekarị mgbanwe mgbe a mmanya n'ezie emechi n'elu ma ọ bụ n'okpuru ugbu a trendline -instead nke dị nnọọ emetụ ya dị ka a nkịtị nkwụsị-ọnwụ iji ga do-. The downside bụ na ị nwere ike na-ịchọpụta na-emekarị na-agbanwe mgbe ikpeazụ mmanya esesịn emechi. Adịghị ama ama, siri version-dịnụ.
Ma na-egosi mejuputa trading alerts, nwee ma ọ bụ gbanyụọ ha na uche dabere na gị trading Mbido.
TradePeriod: Donchian ọwa oge maka trading n'ókè
anyaukwu: Do not exit a trade unless it is in profit or the SL is hit
ATRPeriod: ATRPeriod ka ndị na-akwụsị-ọnwụ
Biko, refer to The Turtle Trading Channel indicator to read the full and original trading rules
Ọ ga-eji na-ntinye n'ókè nke S1 usoro ma ọ bụ na-egosi na S2 (failsafe) usoro
2012-06-12: Updated the indicator adding several strict options for entries, exits, akwụsị na na.
Bụ Turtle Trading System uru?
The arụmọrụ nke Turtle Trading usoro e mgbe niile obi abụọ. Ndị na-esonụ bụ ihe EURUSD (1995-2012) backtest trading niile n'ókè nke a egosi adịghịkwa nzacha ọ bụla trade-, trading na mgbe ugbu a mmanya ka-emechi, kpukpru usen ikpughe dị ka mbụ mbe iwu, na-agbakwụnye na ọnọdụ na trailing nkwụsị-ọnwụ iji ATR 2.
The classic Turtle Trading egosi bụ a Metatrader 4 (MT4) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba akụkọ ihe mere eme data.
The classic Turtle Trading egosi na-enye ohere ịchọpụta iche iche peculiarities na ihe nakawa etu esi na price Ọnọdụ nke na-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya.
Olee otú iji wụnye The classic Turtle Trading Indicator.mq4?
Detuo The classic Turtle Trading Indicator.mq4 gị Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
Right click na The classic Turtle Trading Indicator.mq4
Egosi The classic Turtle Trading Indicator.mq4 dị na gị Chart
Olee otú iji wepu The classic Turtle Trading Indicator.mq4 gị Metatrader 4 Chart?
isiokwu na-esonụParabolic Elele SAR, Parabolic